Madaxwaynaha DDSI Oo Maanta Heer Qaran Kula Xusay Munaasabada Wareegii 7aad Ee Xuska Calanka Qaranka Oo Kadhacday Garoonka Wayn Ee Ciyaaraha Ee Caasimada Dalka Addis Ababa. - Cakaara News
Addis Ababa(CN) Isniin.13.Oct.2014, Waxaa maanta guud ahaan dalka laga xusayay wareegii 7aad ee xuska maalinta calanka qaranka Itoobiya. Waxaana qaybaha kala duwan ee dalka galinkii hore ee maanta looga dabaal dagayay xuska calanka qaranka.
Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maanta galinkii hore heer qaran kula xusay munaasabada wareegii 7aad ee maalinta calanka oo si heer sare ah loo soo aaasimay kana dhacday garoonka ciyaaraha ee xarunta dalka ee magaalada Addis Ababa.
Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay madax sare oo ay kamid ahaayeen madaxwaynaha DFI mudane Mulatu Teshome oo isagu calanka dalka sudhay wakhtigii munaasabada, afhayeenka baarlamanka DFI mudane Abadula Gemeda, madaxwaynayaasha iyo wakiilada deegaanada iyo masuuliyiin kale oo badan. Sidoo kale waxaa kasoo qayb galay ciidanka qaranka, federaal booliska, baambooyda iyo dadwayne aad u balaadhan oo caasimada ku dhaqan.
Madaxawayne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa wakhtigii munaasabada isaguna kor u sudhay calanka DDSI iyadoo sagaalka dawlad deegaanba ay madaxwaynayaashu kor u qotominayeen calanka.
Madaxwaynaha dalka ayaa khudbad kasoo jeediyay munaasibada wuxuuna ka hadlay ahmiyada munaasabadan iyo sida ay u mudantahay xuska calanka qaranka islamarkaana loo baahanyahay in la ilaaliyo.